आइफोन ‘गिफ्ट’ पछि अपराध यात्रामा अघि बढेका सुस्मिताका पाइला विभिन्न माध्यमबाट नजिकिएका कपनका पुरुष पनि उनीहरूलाई भेट्न सोही लोकेशनमा पुगे। जतिबेला इमाडोल बस्ने पुरुष लोकेशनमा आइपुगेका थिएनन्। त्यसपछि संगीताले सोही मौकामा ती पुरुषलाई अंगालो हाल्न थालिन्। योजनाबद्ध रुपमा उनीहरुले उनीसँग बसेको भिडियो गोप्यरूपमा खिचे। सुजन पन्त
श्रीमानसँगको ‘डिभोर्स’पछि लालसरीको अपराध यात्रा
दुवैबीच कुनै प्रकारको यौन सम्बन्ध स्थापित नभए पनि बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीलाई शंका लाग्यो। पछि उजुरी र प्रहरीसँगको बयानमा आफूमाथि बलात्कार भएको भनेकी ललिताले अदालतमा बोली फेरिन्। अदालतमा शर्माले बलात्कार नगरेको बताइन्। सुजन पन्त
काठमाडौं प्रहरीका अनुसार चार हत्या र दुई आत्महत्याका घटनामा नौजनाको ज्यान गएको छ। अधिकांश घटनामा लागूऔषध र विषादीको कनेक्सन देखिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले बताए। सुजन पन्त
दम्पती अपहरण प्रकरण : अनुसन्धान नै नसकी अभियुक्त सार्वजनिक गर्न किन हतारिन्छ प्रहरी?
प्रहरी अनुसन्धानमा उनीहरुको संलग्नता त देखियो होला। तर, बेपत्ता दम्पतीको अवस्था अझै अज्ञात छ। प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अभियुक्त सार्वजनिक गर्दैगर्दा दम्पतीको अवस्थाबारे किन केही भनेन? एसपी आचार्यले पक्राउ परेकाहरुले झा दम्पतीलाई कहाँ राखेको छ भन्ने कुरा खुलाउन किन चाहेनन्? सुजन पन्त
यी चर्चित व्यक्ति जसले जिउँदै श्रद्धाञ्जली पाए...
मष्तिष्कघात भई नर्भिक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा जोशीको उपचार भइरहेको अस्पतालले बताइरहँदा मृत्युको समाचार भाइरल बनेपछि त्यसैलाई आधार मानेर अनलाइन मिडियादेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा समवेदना दिनेको होड नै चल्यो। जिउँदो छँदै निधनको समाचार बन्दै श्रद्धाञ्जलीका शब्द पाउने कांग्रेस नेता जोशीमात्र होइनन्, उनीअघि धेरै शीर्ष नेता तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरूले पनि यस्तै नियति भोगेका थिए। सुजन पन्त
एक ‘सन्काहा प्रेमी’ : चक्कु देखाएर बलात्कार प्रयास, भारतबाट पक्राउ
आफ्नो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि १५ वर्षीया किशोरीलाई चक्कु देखाएर जबरजस्ती होटलमा लगेर बलात्कारको प्रयास गर्ने ‘सन्काहा प्रेमी’लाई प्रहरीले पक्रेको छ। नेपालको इन्टरपोल शाखा र इन्डियन टास्क फोर्सको सहयोगमा भारतको श्रावस्तीस्थित जमुनाह बजारबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मोहम्मद उमर पक्राउ परेका हुन्। सुजन पन्त
विप्लव मूलधारमा आएपछि चिढियो गोइत समूह
सरकारले विप्लवलाई वार्तामा ल्याएपछि गोइत समूह चिढिएको हुनसक्ने सुरक्षा निकायले आँकलन गरेका छन्। स्रोतका अनुसार भूमिगत समयमा विप्लव र गोइत समूहबीच छलफल हुन्थ्यो। मूलधारमा आइसकेका विप्लवले गोइतका नेता कार्यकर्तालाई आत्मसमर्पण गराउने नीति अवलम्बन गरेको र गोइतलाई एक्लाउने प्रयासमा रहेको स्रोतको दावी छ। सुजन पन्त
ललितानिवास प्रकरण : कांग्रेस नेता गच्छदारलाई पक्राउ गर्ने तयारी
बालुवाटार जग्गा काण्डमा एक वर्षदेखि विशेष अदालतको फरार सूचीमा रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको छ। अदालतले फागुन २३ गते उनको सुनसरी दुहबी नगरपालिकास्थित निवासमा म्याद तामेली टाँसेको छ। सुजन पन्त
‘डेटिङ’ लुकाउन बलात्कार र अपहरणको नाटक!
किशोरीले प्रहरीसमक्ष कलम किन्न नजिकैको पसलमा जाने क्रममा मोटरसाइकलमा आएका तीन जना युवाको समूहले आफूलाई अपहरण गरी अज्ञात स्थलमा लगेको र बलात्कार गरी मध्यरातमा सोही ठाउँमा छोडेर गएको भनी बयान दिएकी थिइन्। सुजन पन्त
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कित्तामा विभाजित भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा छ र कुनै पनि बेला सरकारको चाबी फुत्किन सक्ने ओलीलाई डर छ। त्यसैले उनी आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन एकमात्र अस्त्रको रुपमा जनता समाजवादी पार्टीलाई रिझाउन थालेका छन्। सुजन पन्त
आत्महत्या किन रोज्छन् मानिस?
आत्महत्या चिन्ताजनक ढंगले बढ्नुमा आर्थिक र सामाजिक कारणलाई मुख्य ठान्छन् मनोविश्लेषक बासु आचार्य। सञ्चारलगायत प्रविधिको पहुँचले सबै जानकारी हुने तर गरिबीले आवश्यकता पूरा गर्न समस्या हुँदा मानिसमा निरासा बढेको उनी बताउँछन्। सुजन पन्त
२७ महिनापछिको फैसलामा सर्वोच्चको ‘कमजोरी’
राजनीतिक असफलताले मुलुक संकटमा परेका बेला सर्वोच्चले कसको ‘सेटिङ’ मा फैसला गर्‍यो? सर्वोच्चको फैसलाले के सन्देश दिन खोजेको हो? गम्भीर प्रश्न उब्जेका छन्। सुजन पन्त
सर्वोच्चको फैसला : अप्ठेरोमा प्रचण्ड–माधव पक्ष, के गर्लान् दुवै समूहले?
हाल प्रचण्ड–माधव समूहमा पूर्व एमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेता छन् भने ओली पक्षमा पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका नेता छन्। यसअनुसार अबको नयाँ माहोलपछि एमाले पृष्टभूमिका नेताहरु ओली नेतृत्वमा फर्केलान् ? या माओवादी पृष्टभूमिमा लागेका नेताहरु प्रचण्ड नेतृत्वमा फर्केलान् ? कि यथास्थितिमै कायम रहलान् ? सुजन पन्त
सरकार–विप्लव सम्झौता : फोर्सल्यान्डिङ कि सेफल्यान्डिङ?
सम्बोधन सुरुवातमै ओलीले नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको भन्दै विप्लवले चालेको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कदम साहसिक भएको बताए। उनले विप्लवको आन्दोलन फोर्सल्यान्डिङ नभएर सेफल्यान्डिङ भएको सुनाए। सुजन पन्त
बलियो हुँदा प्रतिबन्धको निर्णय, कमजोर हुँदा विप्लवको साथ
गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद ‘कू’ गरेसँगै विप्लवले एक विज्ञप्ति जारी गरेरै त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यसपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसले निम्त्याएको गम्भीर परिस्थितिमा ओलीले विप्लवको साथ खोजेका हुन्। फागुन २३ गतेलाई संसद अधिवेशन आव्हानसमेत भइसकेको अवस्थामा नेकपा विभाजनको वैधानिक प्रक्रिया पुरा हुनेबित्तिकै ओली सरकार ढल्न सक्थ्यो। यस्तो अवस्थामा ओलीले विप्लवको साथ खोज्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। सुजन पन्त
विप्लवका १४४ नेता-कार्यकर्ता रिहा हुँदै, के छ कानुनी प्रावधान?
सहमति पत्रमा प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय, मुद्दा खारेजी र सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ गर्ने उल्लेख छ। विप्लव समूहका १ सय ४४ जना नेता–कार्यकर्ता अहिले जेल र हिरासतमा छन्। तीन बुँदे सहमतिपछि उनीहरुलाई प्रक्रिया पुरा गरेर रिहा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सुजन पन्त
सुरक्षामा मात्रै मासिक ८० लाख खर्च, तर प्रधानमन्त्री भन्छन्–ममाथि हमला भइहाल्यो भने अनौठो नमाने हुन्छ
सुरक्षा संयन्त्र पनि अचम्ममा परेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेरै यस्तो कुरा बाहिर ल्याए या हचुवाको भरमा हावादारी कुरा गरे? सुरक्षा अधिकारीहरु भन्छन्, ‘उहाँले किन बोल्नुभयो हामी अचम्मित छौं। प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्तिबाट के प्रमाणित गर्न खोज्नुभएको हो?’ सुजन पन्त